Khaladka naqshadeynta naxdinta leh ee Samsung Galaxy Note V | Wararka IPhone
Cilladaha argagaxa leh ee Samsung Galaxy Note 5
Wararka IPad | | Tartanka, Noticias
Marka qalab wax lagu garaaco suuqa, waa arrin saacado ah ka hor intaan taageerayaasha shabakadu bilaabin inay daabacaan qalab iyo naqshad cillad la sheegay, sida ku dhacday kiiskii anteenada ee iPhone 4, rinjiga ka soo dhacayay iPhone 5 iyo ugu dambeyn iPhone 6 oo labalaabma. Maanta waxaan ka hadlaynaa dhinaca kale, Samsung waxay dhawaan soo bandhigtay Samsung Galaxy Note V oo guuldaradeeduna ay ka baxsan tahay arrinta qaybaha, Cilad ku timid naqshaddu waxay ka dhigi kartaa taleefankaaga mid aan la isticmaali karin haddii aad S-Pen si qaldan u geliso, ficil ay si aad ah ugu fududahay in lagu dhaco.
Markii aad S-Pen gadaal ka geliso ma helaysid wax carqalad ama dhib ah oo kuu oggolaanaya inaad geliso dhamaadka taleefanka sidii aad si sax ah u qabanaysay. Maxaa dhacaya markaan ku galo si khaldan? ku xayiran gudaha nidaamka taasi waxay ogaaneysaa inaan ka saarnay meesheeda waana wax aan macquul aheyn in laga saaro halkaas, taas oo naga hor istaageysa isticmaalka taleefanka maaddaama nidaamyada S-Pen ay shaqeynayaan waxayna noqon kartaa mid aad u dhib badan in lala shaqeeyo taleefanka xaaladahaas, ha ku xusin in caarada qalinku xoogaa yar ku dheggan tahay.
Waxaan isku dayaynaa inaan dhahno waa cillad nashqadeyn muuqaal ah maxaa yeelay taasi kuma dhaceyso nooca Edge ee taleefanka, oo ay ku jiraan galaas xoogaa qalooca oo loogu talagalay shaqooyin kala duwan. Ciladan oo noqon doonta mid caam ah waxay kugu kici kartaa 800 euro Qalabka. Shaki la'aan waxaan ka mid nahay khaladaadka ugu weyn ee naqshadeynta ee aan aragnay muddooyinkii u dambeeyay, mana uur qaadan karno in shirkad khabiir ku ah dhinacyo kala duwan ay awood u yeelatay inay si dhuumaaleysi ah ku soo gasho, waxaan xusuusannahay in Samsung ay u heellan tahay soo saarista noocyo badan oo elektaroonig ah macaamiil kala duwan, oo iyagu ma ahan kuwo ku cusub noloshan taleefanada waaweyn qalin qalin leh, horeyba waxay ugu jiraan shanaad xaqiiqda.
Waxa ugu xun ayaa ah inay umuuqato taas Samsung ayaa hoos u dhigaysa arrinta Tan iyo markii ay gacmahooda ku maydheen dhibaatada noocan oo kale ah, waxay soo saartay bayaan ay ugu gudbineyso isticmaaleyaasha buuga tilmaamaha inay u isticmaalaan qalabka si sax ah. Buug gacmeed aan meelna looga heli karin qaab jireed oo ku qasbaya dadka isticmaala inay soo dejiyaan PDF. Shaki la'aan, udiyaar garow inaad aragto shabakada lagu soo duulay kiisaska dadka ku tuuray € 800 qashinka qaabkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Cilladaha argagaxa leh ee Samsung Galaxy Note 5
Nabadoon John. Waxaan idin ogeysiinayaa in Xusuusta 2, 3 iyo 4 ay tahay wax aan macquul aheyn in qalinka fooraro.
Jawaab Miguel Hernández
Maxayse tani ku xiran tahay xaaladda hadda jirta ee iPhone-ka?
Mise dan kama lihi iPad-ka
Waad salaaman tahay Miguel, waad ku mahadsan tahay inaad ii soo sheegtay laakiin sida iska cad waxaan hore u ogaa inaadan qoraal kale ku qorin waxaad sameyn karto gadaal, ma dhihin way noqon kartaa, waxaan ku iri maqaalkaaga waxaad ku faaloonaysaa inay aad u badan tahay in la dhigo qalin qaldan gadaal ahaan si qalad ah ama wax kastoo ahba, oo waxaan idhi waxaan haystay qoraalada oo dhan dhawr sanadood weligayna maan lahayn ujeedo qasab ah oo qalinka foorarinaysa, sida iska cad qaabka qalinka moodeliyadii hore ayaan u oggolaan in sidaa la sameeyo waxaan ogahay isticmaalaha joogtada ah waxaan kaliya sheegayaa inaanan waligay khaladkaa guud ee aad ka faallayso qalinka foorariyo, sidaa darteed inkasta oo nashqada tusaalahan u dambeeyay u saamaxayo inuu sidaa sameeyo, uma maleynayo waa dhibaato aniga aniga maadaama aanan waligey ku dhicin qaladkaas moodooyinka kale, si aan u arko haddii aad hadda fahantay iyo in kale
Adrian ayaa ah in websaydhada ugu badan ee macaamiisha ahi ay had iyo jeer leeyihiin 60% wararka ku saabsan Samsung, waa waali saafi ah, waxaan hayaa barnaamijka "appygeek" ee aan ku haysto dhammaan wararka teknolojiyada, mana arag mid ka mid ah android ama samsung mid aad u waalan sida dhammaan tufaaxa, waxa aan ka helo tufaax waa samsung samsung kan kale, si aan u arko haddii aad ogaatay, asxaabta qaaliga ah, in tufaaxa laga tagay.
Shaashadda 'retina' ma sii cajaa'ibto, sida uu sheegayo Samsung oo soo bandhigeysa ayaa ah kuwii ugu fiicnaa ee abid la arko.
Mushaharka Samsung wuxuu kun jeer ku dhuftaa mushaharka tufaaxa, maaddaama ay leedahay teknolojiyad ay lacag ku bixin karto iyadoon loo baahnayn NFC
Maxkamadda Sare ayaa hadda diidday sheegashada patent-ka ee sii deynta, iyadoo sababta u siineysa Motorola, si ay u aragto haddii aad ogaato maadaama wax walbaa aadan adigu iska lahayn, in Apple ay ku dhowdahay wax kasta oo laga soo qaatay fikradaha kale ee horay u jiray, marka lagu daro saacadda waxay dhahaan Samsung-kan cusub waa nuqul ka mid ah Apple-ka, waxaanan leeyahay ... mmm cafi yaa ka bilaabay qeybta smartwatch? Samsung, iyo sharad weyn, iyo tufaaxa ayaa go'aansaday inay KOOBIYAAN oo ay galaan suuqaas, sida ay ula socdeen Samsung cabirka sii kordhaya ee shaashadaha, Samsung waxay si weyn u tartameysay oo ay soo baxday guuleyste, Apple wuxuu sheegay in aysan waligood kor u kicin doonin inji oo hadda fiiri.
Waxaan ku qoslayaa shirkadan ka soo horjeedda mabaadi'da aadanaha, tikniyoolajiyadda waxaa iska leh qof walba iyo qof walba, Apple-na way ka soo horjeeddaa arrintaas
Waxay ku noolyihiin waagii hore
Fiiri meesha, waxaan kugu dhiirrigelinayaa inaad tiriso inta Samsung ama wararka Android ah ee ku jira degelkan oo isbarbar dhig natiijada isla xisaabta websaydh kasta oo Android ah, waxaad arki doontaa sida aad ula yaabi lahayd
Sidoo kale waad layaabi laheyd inaad aragto inta isticmaale ee Android booqda boggaga Apple si fudud si ay wax uga qoraan waxyaabaha ay ku farxaan nidaamkooda (oo aanan diidin).
By habka, waxaa jiray smartwatches dheer ka hor Samsung xitaa ma uusan ka fekerin naqshadaynta u gaar ah.
Jawaab Luis Padilla
Khaladkayga iPhone kamana foorarsan, wax in badan lagu adkaystay. Laakiin iPhone-yadu waxay umuuqdeen inay fooraraan iyagoo fiirinaya kaliya. Waan hubaa in kabadan hal qalin qalinka foorari doona kadibna waan qosli doonaa.
Haddii 2,3, 4 iyo 5 ay suurta gal ahayn in qalinka gadaal loo dhigo, way iska cadahay inay khalad naqshad tahay in la awoodo in lagu sameeyo XNUMXtii, maadaama laga yaabo inaad ku samayn karto si qalad ah ama laga yaabee wiil aan amaahino mobilada, Shakhsiyan, kuma mashquulsana khaladaadka Samsung, waxay si fudud dib ugu xaqiijinaysaa xikmadaha xulashada iPhone. Maaha wax la mid ah in hal moodle la yeesho oo sannadba sannadka ka dambeeya la hagaajiyo marka loo eego boqollaal moodello ah oo noocyo iyo qiimeyaal leh oo aan midkoodna gaadhin dhammaystirka iPhone-ka, wax uun ay ku ilaalinayaan qiimeyntooda muddo, wax kuma dhacdo mobilada Sansumg ee bilo gudahood qiimahoodu ka yar yahay kala badh. Marka la eego smartwatches, Apple ma ahayn kii ugu horreeyay laakiin wuxuu ahaa kan kaliya ee guuleeystay illaa iyo markii applewatch kaliya dhowr boqol oo nooc oo kale la iibiyay.
Ku jawaab Fernando
Xusuusin 5 iyo iPhone 6: Tijaabada xawaaraha [fiidiyow]
Ku habee astaanta reboot-ka iPhone-kaaga adoo adeegsanaya BootLogoCustomizer tweak